घर » सांस्कृतिक यात्रा समाचार » थाईल्याण्ड देखि यूके: ओह कसरी COVID-19 ले परिदृश्य परिवर्तन गरेको छ
by डेभिड बैरेट
थाईल्याण्ड बाट युके - डेभिड ब्यारेटको कर्नवलमा नयाँ निवास
द्वारा लिखित डेभिड बैरेट
डेभिड ब्यारेटका लागि, Thailand२ बर्ष थाईल्याण्डमा बसोबास गरे पछि, यो पूर्व वरिष्ठ यात्रा कार्यकारी हालै युकेमा घर फर्कन घर फर्के। यहाँ उसको कथा छ ...
बेलायतमा पहिलो पटक थाईलैंडबाट आउँदै गरेको महामारीमा अवतरण गर्नु भनेको रात र दिन जस्तो थियो।
जब म मास्क लगाएको बैंकमा घुम्न थाल्यो उनीहरूले हताश गरे, उनीहरूले सोचे कि म तिनीहरूलाई लुट्छु भनेर होइन, तर उनीहरूले सोचे कि म बिरामी छु "चिनियाँ भाइरस"।
म बस्नु पर्छ वा म यहाँ hightail गर्नुपर्छ?
एक वर्ष र भाग्यको एक उल्टो। एक बर्ष पहिले, मार्च १ 18, २०२० मा मैले कर्नवालमा सम्भावित सम्पत्ति लगानी हेर्न युकेको लागि उडान गरें। म योजना बनाइएको रेल सवारी र कर्नेलवालको ट्रेक अघि तीन दिनको लागि दक्षिणपूर्वी इ to्ल्यान्डमा थिएँ।
दिन दुई यूकेमा, ब्रिट्हरू महामारीको शुरुआती दिनहरूको साथ पकड संग, र म एक भेट को लागी मेरो बैंक हेर्न गए। जब म मास्क लगाएर बैंकमा पस्दै थिएँ, म ग्राहकहरु र स्टाफ हरु लाई सुन्न सक्छु जब तिनीहरु पछि पछि हटे र डरले मलाई हेरिरहेका थिए किनकि मैले अनुहारको मास्क लगाएको थिएँ। एक जना जवान क्लर्क मकहाँ आइपुगे र मलाई एउटा सानो सभा कोठामा लग्यो। बैंक व्यवस्थापक त्यसपछि भित्र आए र मलाई अनुहारको मास्क लगाएको देखेर डराए। "के तिमी बिरामी छौ?" उनले प्रश्न गरी। "के तपाईंलाई चिनियाँ भाइरस छ?" मैले दृढताका साथ जवाफ दिएँ कि मैले आफ्नो सुरक्षाको लागि मास्क लगाएको थिएँ, किनकि उनी राम्रोसँग संक्रमित भई भाइरस बोक्न सक्छिन्। त्यस बिन्दुमा त्यो जवान क्लर्क कोठामा दगुरे र बसिरहेको बैंक प्रबन्धकको माथि हिंडेर जन्तुनाशकको ​​राम्रो धुवाँ हावामा छिर्न थाल्छ। ड्रपलेटहरू ममा पुगेनन् तर प्रबन्धकको ल्यापटप र कपालमा उत्रिए। रिसले चूर भएर व्यवस्थापकले क्लर्कलाई यसो भन्दै हप्कायो, "तपाईंले मेरो कुञ्जीपाटी भिजाउनु भएको छ!" त्यस लिपिकले आफ्नो बायोसिस्योरिटी कार्यहरूको औचित्य देखाउनु अघि, म्यानेजरले ढोकालाई औंल्याए र उनको कम्प्युटर मेटाइदिए।